Diyopost.com :: पत्याउनुहुन्छ ? एउटा अण्डाको मुल्य ६६ रुपैयाँ ! पत्याउनुहुन्छ ? एउटा अण्डाको मुल्य ६६ रुपैयाँ ! - Diyopost.com
पत्याउनुहुन्छ ? एउटा अण्डाको मुल्य ६६ रुपैयाँ !
सोलुखुम्बु, भदौ २९ । सोलुखुम्बुको नाम्चेमा कुखुराको अण्डा प्रतिगोटा ६६ रुपैयाँसम्ममा किनबेच हुने गरेको छ । पछिल्लो समय खाद्यान्न ढुवानी ठप्प भएपछि होटल व्यवसायीले एउटा अण्डा खरिदमा ६० रुपैँयाभन्दा माथि तिर्नु परेको हो ।
अहिले नाम्चेका ८० प्रतिशत होटलहरु सञ्चालनमा आइसकेका अर्का व्यवसायी लामाकाजी शेर्पा बताउँछन् । उनले सामग्री अभावले अहिले होटलहरुमा दाल तरकारी पाक्न सक्ने अवस्था नभएको बताए । प्रतिकुल मौसमले हवाइ उडान हुन नसक्नु र विमानले कार्गो उडान नभर्नुले पनि खाद्यान्न अभाव भएको हो ।कारोबार दैनिकमा अमृत राईले खबर लेखेका छन् ।